Wzọ 5 Omume Kalinda gị nwere ike ime ka SEO | Martech Zone
Ihe ochicho njini Search (SEO) bu agha enweghi njedebe. N'otu aka, ị nwere ndị ahịa na-achọ ịkwalite ibe weebụ ha iji melite nhazi na njikwa njikwa ọchụchọ. N'aka nke ọzọ, ị nwere ndị ọrụ injinịa ọchụchọ (dị ka Google) na-agbanwe agbanwe algọridim ha iji nabata usoro ọhụụ, amaghi ama ma mee ka web dị mma, na-agagharị ma na ahaziri iche.
Offọdụ n'ime ụzọ kachasị mma iji bulie ogo ọchụchọ gị gụnyere ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke ibe na backlinks, na-agba ume ịkekọrịta mmekọrịta mmadụ na ijide n'aka na saịtị gị nwere ọdịnaya ọhụụ. Ngwurugwu nkịtị? Ihe ndị a niile nwere ike nweta site na mwepụta nke kalenda mmemme.
E nwere ụzọ dị mma gị kalenda omume online nwere ike imetụta SEO - lee otu:
Dịkwuo ọnụ ọgụgụ nke onye peeji nke
Na-arụ ọrụ n'ịzụ ahịa, ị maara mgbalị na-abanye n'iwepụta peeji ọdịda ọhụrụ. Enwere oyiri ide, okike iji chepụta, na nkwalite ịme. Kalenda ihe omume na-ewe usoro a ma belata oge itinye ego gị mgbe ị na-amụba ọnụọgụ nke ibe nsonaazụ dị na saịtị gị. Ihe omume nke ọ bụla na-enweta ibe ya, na-abawanye ọnụọgụ peeji nke maka engines ọchụchọ iji dọrọ. Karịa naanị ọnụọgụ ọnụọgụ, agbanyeghị, ibe ọhụụ ọ bụla na-enye gị ohere ịnweta ọnụọgụ ọnụọgụ nke ọdụ ogologo-ogologo iji bulie maka. Na mgbakwunye, ịnwe peeji nke mmemme ọ bụla karịa kalenda otu peeji na-ahụ na ndị ọrụ gị ga-anọ ogologo oge na saịtị gị n'ozuzu - na “ibi oge” bu SEO gold.
Ibe ihe omume nke otu nwere ihe ọzọ yana: ha na-abawanye ụba nke backlinking. Ihe amara nke bu ibu nke SEO bu ugboro ole saịtị ndị ọzọ jikọtara na saịtị gị. Nchọgharị ọchụchọ na-akọwa njikọ a dị ka votu nke obi ike site n'otu saịtị gaa na nke ọzọ, na-egosi na saịtị gị ga-enwerịrị ọdịnaya bara uru n'ihi na ndị ọzọ achọpụtala na ha kwesịrị ịkekọrịta. The peeji ndị ọzọ i nwere (eche otutu omume peeji nke karịa a otu peeji nke kalenda), ndị ọzọ Ohere ka saịtị ejikọta azụ. Otu saịtị nwere ike jikọta ya na nkuzi okwu atọ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ịnweta gị ugboro atọ nke backlinks karịa ma ọ bụrụ na itinyela mmemme gị niile n'otu ibe. Voila! Njikarịcha.
Gbaa ndi mmadu ume
Ngwunye ọchụchọ na-adabere na akara ngosi mmekọrịta ọha na eze dị ka ihe ogo. Ike nke mgbaàmà ndị a nwere ike ịdị iche dabere na ihe dịka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọnụ ọgụgụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya (yiri backlinks). " Omume kalenda na-ewu na-elekọta mmadụ nkekọrịta ike na-eme ka ọ dị mfe maka ọbịa gị na-akwalite gị ihe kamakwa-etinye aka na gị na-elekọta mmadụ na saịtị rankings mgbe search engines na-enyocha gị peeji nke. Nke a na - eme ka ohere omume gị dị elu karịa na nsonaazụ njin ọchụchọ n'ihi na njikọ ejikọtara na mgbasa ozi mmekọrịta na-enyere engines ọchụchọ aka chọpụta ntụkwasị obi na ogo nke weebụsaịtị.
Kwado aha peeji pụrụ iche na nkọwapụta meta
Mgbe ahụ enwere ụlọ akwụkwọ ochie SEO, usoro a nwalere na ezi-okwu nke ịhazi aha meta na nkọwa na ibe ọ bụla iji mee ka ha nwee ọkwá dị elu ma ọ bụ mkpụmkpụ ọdụ. Meta utu aha bụ HTML Koodu agbakwunyere na peeji nke nkụnye eji isi mee nke na-enye isiokwu ozi ọchụchọ engines. Mgbakọ na mwepụ na nke a dị mfe: ibe ndị ọzọ nwere ekele maka kalenda ihe omume pụtara ohere ka ukwuu iji hazie peeji nke ọ bụla, yana ọ ga-ekwe omume na peeji gị ga-aha maka ọtụtụ isiokwu. Gịnị si na ya pụta? A ga - ahụ ibe gi na ngwa nchọta maka okwu ịchọrọ ịhazi, maka na ị nweela ohere inye ha nlebara anya ọ bụla ha kwesiri.
Nweta ọdịnaya ọhụrụ
Nụla okwu ahụ na mbụ: ọdịnaya bụ eze. Phrasedị nkebi ahịrịokwu a nke 2016 nwere ike ịgụ “ọdịnaya dị ọhụrụ, nke na-agbanwe agbanwe bụ eze.” Yabụ, ịdekọtara ụlọ ọrụ blọọgụ blọọgụ ma ọ bụ bido ihu ọdịda peeji nke 2011. Ọ bụ ezie na ọ dị mma maka okporo ụzọ, injinị ọchụchọ na-achọ karịa mgbe ọ na-abịakwute ndị ahịa na-akwụghachi ụgwọ na ọkwa. Lee ya ebe a, si na Google n'onwe ya:
Google Search na-eji algorithm nke ohuru, ezubere iji nye gị nsonaazụ kacha ọhụrụ.
Isi okwu? Ihe ohuru di na saiti gi di ka onu ogugu di elu na njin njin nyocha - gini bukwa kalenda mmekorita ma obu isi iyi nke ihe ohuru? N'ihi na ihe omume mpaghara nwere nke ọ bụla nwere ibe ihe omume ha, okike nke ihe ọhụụ pụtara peeji ọhụrụ maka gị yana ọdịnaya ọhụrụ maka saịtị gị. Ọ bụ mmeri-mmeri ọnọdụ mgbe ọ na-abịa SEO.
Kalenda mmemme nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na SEO. Site na ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke ibe ọhụụ na weebụsaịtị, na-agba ume backlinks, ma na-enyere gị aka ịhazi aha meta na nkọwa niile, usoro ihe omume teknụzụ ziri ezi na-enye gị ohere ịme mmetụta na ọkwa gị na-enweghị isi na-agbanwe agbanwe engines na-agbanwe agbanwe algọridim .
A bụ ihe atụ nke onye omume ọdịda peeji nke si Boston College:
Localist bụ igwe ojii na-eweta usoro ihe omume teknụzụ na-enyere ndị otu aka ibipụta, jikwaa ma kwalite ọtụtụ mmemme. Ngwurugwu kalịnda mmekọrịta nwere mmekọrịta siri ike nke ndị obodo na-enye arụmọrụ nke kalịnda azụmahịa agbakwunyere, ike nke ngwa ọrụ mmekọrịta na ọgụgụ isi nke nchịkọta iji bulie mmemme ire ihe omume. Ruo ugbu a, Localist kwadoro ihe karịrị nde 2 na ụwa.
A bụ ihe atụ nke isi kalenda peeji nke Nyochaa Gwinnett:
Gaa Leta Onye Ọchịchị Soro @localist
Tags: backlinksmahadum bostonkalendakalenda mmemmeihe omumeihe omume seoiheohuru ọdịnayagoogle +nwachukwuonye nwe obodonkọwa nke metaikeaha peejiala ọchụchọọchụchọnjikarịcha saịtịnchikotaweebụ